Nezvedu - SHUNDA yepasi rose Co., Ltd.
SHUNDA Kumba Kushongedza ndiko kugadzira, kutumira kunze, uye kuendesa ese marudzi ezvishongedzo zvemumba zvigadzirwa. Isu tinopa akasiyana siyana akagadzirwa zvigadzirwa uye masevhisi, kubva mukugadzirwa kwechigadzirwa kusvika kuchirongwa chekugadzirisa. Isu tinogadziraMirror (Girazi regirazi, girazi reMwedzi, hafu yemwedzi girazi, girazi rakatenderera, girazi nesherufu, Metal firati girazi, Wooden kumashure girazi, nezvimwewo), Arts & Crafts . Rambi / Chiedza (Matafura etafura, marambi emadziro, mwenje wedenga, nezvimwewo) uye zvishongo zveCeramic kana zvipo zveKisimusi, Halloween, Easter neValentine zvichingodaro. Nemakore mazhinji echiitiko nekuedza, isu takagadzira kuita imba yekushongedza maindasitiri emaketani, uye kushambadzira zvine hungwaru maindasitiri cheni, kusanganisira girazi, pasherufu, marambi uye nezvimwe zvigadzirwa. Uye isu tine izere yakasimba yemhando manejimendi manejimendi kudzora nhanho dzese kubva kuzvinhu, sampuli, kugadzirwa, kurongedza kuendesa kuverengera chigadzirwa chose.
Isu tinoongorora mutemo wevatengi kutanga, mhando yekutanga, mutengo wakanakisa uye sevhisi. Uye isu tinotarisira kumisikidza hurefu-bhizinesi hukama newe.
Isu tine maketeni akasimba emaketeni uye akakwana chigadzirwa tambo, iyo inogona kusangana dzakasiyana siyana dzevatengi 'zvido.
Isu tine timu yepamusoro yevagadziri, kugona kukuru kwechigadzirwa, hunyanzvi hwekugadzira michina, timu yekutengesa yehunyanzvi yekupa vatengi imwe-yekumira sevhisi mhinduro.
Parizvino, isu tine-yakadzama kudyidzana nezviuru zvepamusoro mabhizimusi kumba nekune dzimwe nyika. 80% yezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kunze. Wese munhu weSHUNDA anoramba achivimbisa iwe chinzvimbo chakanaka nehunyanzvi, kuvimbika, uye kugona kwepamusoro. Isu tinotenda isu tichava shamwari yako yakavimbika mune ramangwana.
Zvekutengesa kunze kwenyika isu zvakare tine nyanzvi yekutengesa timu uye timu yeR & D nguva dzose kubasa rako. Isu tinopa sevhisi sevhisi yekutenga, kugadzirisa uye kuronga kutumira kwezvinhu. Isu tinoita kutumira neine yakaderera mutengo, ipfupi nguva uye yakachengeteka kutakura. Kugutsikana kwako isimba redu guru uye kukohwa!
Shunda Kumba kushongedzwa Mission: Dhizaini yekugadzira, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, Yakanakisa Sevhisi, Shunda ichave yako Sarudzo yepamusoro.